Ahoana ny fomba ahafahana miverin-dalana momba ny tranoko?
Fantatrao fa manatsara hatrany ny algorithm Google sy ireo fitaovam-pikarohana goavana hafa hanohanana ireo fomba amam-panao mampiahiahy ary hampitsahatra ny fanitsakitsahana ny lalàna. Ny hetsika mampihetsi-po indrindra dia tonga tamin'ny taona 2013 raha nandao ny fahefany ny mpitantana ny SERP izay napetraka tao amin'ny toerana TOP. Google dia nanamarika ary nandany ny tambajotra rehetra mifandraika ary nanasazy ireo mivarotra rindran-damina. Hatramin'io fotoana io dia niova tanteraka ny fomba fanorenana rohy. Ireo mpividy enta-madinika dia nianatra lesona sarobidy avy amin'io fampivoarana goavana Google io ary nampifanaraka ny tontolo vaovao momba ny fifandraisana vaovao izay mamporisika ny lohamilina sy ny fivoarana voajanahary ho an'ny tranokala.
Ny indostrian'ny dantelina dia singa manokana ao amin'ny tsena an-tserasera, izay miavaka amin'ny fifaninanana ambony ary ny avo lenta ho an'ny orinasa. Isan'andro dia manapa-kevitra ny mpitsabo ny mpitsabo mba hanangana ny orinasany madinika an-tserasera amin'ny fanantenana fa ny mpanjifany mety hahita azy sy ny fifandraisana aminy. Na dia izany aza, ny ankamaroan'ny orinasa dia miatrika ny olana mitovy - ny tsy fisian'ny fahafahana manangana hetsika fanentanana mafonja izay manaraka ny fenitry ny fikarohana.
Ny olana mahazatra indrindra atrehantsika amin'ny fampiharana ataontsika dia ny tsy fahampian'ny fomba fananganana rohy. Ny tompona tranonkala fotsiny dia tsy mahalala ny fomba fananganana fananganana rindrambaiko organika izay hitondra azy ireo vokatra tonga lafatra. Raha tokony ho izany, dia mianjera izy ireo noho ireo fomba fanao mainty hoditra izay miteraka vokatra haingana nefa tsy misy kalitao ary koa ny sazy mikendry ny fikarohana. Na dia izany aza dia azo atao ny manadio ny rohy fananganana, hampivoatra ny kalitao sy ny tambajotra mifandraika amin'ny zavamaniry, ary araho ny fironana farany ao amin'ny SEO sy ny rohim-pifandraisana hanamafisana ny laharana amin'ny Google SERP.
Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hahita toro-hevitra sarobidy ho an'ny fampivoarana ara-tsosialy an-tserasera ianao indrindra amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny rohy.
Nahoana ianao no tsy tokony handeha amin'ny tranonkala fifandraisana?
Maro ireo tranonkala misy tsiambaratelo izay manorina ny rohy amin'ny tamba-jotra. Amin'ny fividianana rindran-damina, manantena ny hampitombo ny fahatsiarovany ny marika izy ireo ary hahasarika ny fifamoivoizana. Na izany aza, amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, dia miafara amin'ny fialan-tsasatra sy ny sazy ry zareo rehefa midina ireo mpandray anjara amin'ny fifanakalozam-barotra ankapobeny, fifanakalozan-tehezana na teknika hafa mampiahiahy.
Ny vondrona finday dia vondron-tranonkala mifandraika. Ireo tranonkala ireo dia mety ho an'ny olona iray na vondron'olona iray. Raha ny fitsipika, dia nafenina moramora avy amin'ny milina fikarohana izy ireo mba handosirana azy ireo ho fantatra sy hamaly azy ireo.
Araka ny fanavaozana ny algorithm vaovao vaovao dia mendrika ny hosazina ireo vohikala mifandraika amin'ny tambajotra mifandraika amin'ny lisitry ny fikarohana. Ny tambajotran-tserasera dia tsy afaka mitondra tombam-bidy ho an'ny fanentanana fananganana rohy satria izy ireo dia misolo vava amin'ny teny sy ny sosialy. Ankoatr'izany, dia mampiasa fampiendrehana eo amin'ny toerana misy azy ireo izy.
Inona no rohy mahasoa amin'ny tranokalan'ny toeram-pitsaboana?
Ny tanjona voalohany amin'ny fanentanana fanorenana rohy dia tokony hamorona ny fananana azo havaozina ary hahazoana rohy tsara araka izay azo atao. Ho fananganana fanentanana fananganana rindran-kira, dia tokony hamorona votoaty tsara sy manan-danja ianao ary koa ny fampisehoana azy. Hanampy anao hahatonga ny votoaty ho zarain'ny mpampiasa izany. Raha tsy izany, dia ho sarotra be ny handresy lamàtra ara-dalàna. Ny fomba iray hafa azonao ampiasaina mba hahatonga ny vokatry ny fanatsarana ny toetranao dia ny hampisy fifandraisana tsara amin'ny influencés malaza ary handresy lahatra azy ireo hifandray amin'ny tranonkalinao.
Raha manana fanontaniana ianao hoe nahoana no tokony hampifandray anao ny tranokalan'ny toeram-pandihizana iray hafa, ireto antony telo ireto dia hanampy anao hahita ny valiny.
Voalohany indrindra, tokony hahasarika ny votoatinao ho sarobidy ho an'ireo mpamaky azy izy ireo. Ny hevitrao dia tokony hanohana izay tian'ireo bilaogera sy orinasa hanolotra ny mpanjifany. Raha ny faharesen-dahatry ny finoanao no eo amin'ny pejy iray ihany, dia azo inoana angamba fa ireo mpifindra monina ireo dia hampifandray amin'ny tranokalanao ho loharanom-baovao sarobidy. Midika izany fa amin'ny fametrahana ny kalitao sy ny fampahalalana tsara, ianao dia mampiakatra ny lanjanao sy ny fahefana amin'ny sehatra matihanina sasany.
Ny toe-javatra faharoa izay ahitana tranonkala hafa mifandraika amin'ny niche dia mety hampifandray amin'ny sehatr'asanao dia ny hoe rehefa fantatr'izy ireo, matoky ary tahaka izay ataonao. Raha manome ny votoatiny amin'ny kalitao ianao, ny fanohanan'ny mpanjifa, ary ny toeram-pitsaboana, dia mety hahatsikaritra anao ho mpiara-miombon'antoka ara-barotra sarobidy indrindra ny mpilatsaka an-tsehatra amin'ny media. Ankoatra izay, raha matoky ny marika anao ny mpiserasera ary manombana tsara ny tolotra omenao, dia azo inoana fa hizara ny hafatrao ry zareo ary hametraka rohy amin'ny tranokalanao ao amin'ny pejiny. Azonao atao ny mividy fifandraisana tsara amin'ny blaoginao amin'ny mpihaino marobe na tranonkala ao an-toerana izay manana fifandraisana eo an-toerana. Vokatr'izany dia hitondra ny fifamoivoizana an-tserasera tianao kokoa ianao ary hanatsara ny laharana eo amin'ny SERP.
Ny antony iray hafa mahatonga ny mpifaninana hivarotra ny tsena niry haniry hiara-miasa aminao dia tombony iraisana amin'ny backlinks. Azonao atao mora foana ny miverin-dàlana amin'ny fanolorana azy ireo. Raha manohana ny lohahevitra apetrakao ny rindran-kaonty dia hahita valisoa loharano fidirana amin'ny Internet ianao. Izany no mahatonga ireo tranonkala hafa ao amin'ny tsenanareo ny mijery ny faritra misy anao ho loharano sarobidy hampifandraisana azy ireo. Ho fampiharana io dingana io, dia mety hifandray manokana amin'ny mpiara-miasa aminao ianao, ary hilaza ny momba ireo backlinks vaovao azonao omena azy ireo.
Backlinks tsara amin'ny tranokalan'ny toeram-pitsaboana
Azonao atao ny mampiasa ireto hevitra manaraka ireto mba hanatsarana ny tranokalanao SEO ary hampitombo ny fahatsapanao ny marika.
Link to sources authoritative
Eo imason'i Google, ireo tranonkala mpamorona dia ireo izay miakatra ambony noho ny PageRank sy ny isan'ny loharano azo antoka izay manondro azy ireo. Raha loharanon-tranonkala misy rindrambaiko ambony no mampifandray ny tranonkalanao amin'ny sainao, dia hanampy ny SEO amin'ny sehatra tena izy ary hahasarika ny fifamoivoizana amin'ny sehatra misy anao.
Backlinks izay miteraka fifamoivoizana
Ny singa manan-danja amin'ny fanentanana fananganana rohy dia ny mahazo rohy mifandraika sy logic izay manondro ny sehatra misy anao. Tokony hampiarahina amin'ny votoatiny manan-danja sy manan-danja ireo rohy ireo, ary tokony hifanaraka amin'ny tenimiafina avoakanao ny tononkalonao. Tsy maninona raha toa ka sarobidy avy amin'ny fomba fijerin'i Google ny rohy toy izany na tsia, raha mitondra mankany amin'ny fahombiazan'ny orinasa izy ireo, dia tokony hiezaka mafy izy ireo.
rohy mankany amin'ny media sosialy
Ireo rohy mifandraika izay mety ho azonao avy amin'ny sehatra media sosialy sy sehatra fiaraha-miasa dia mety hanatsara ny ezaka fanatsarana ny fikarohana. Google dia mankasitraka ny fahafaha-miditra goavana amin'ny media sosialy sy tranonkala loka izay mankafy ny tambajotra sosialy sy ny rohy media sosialy.
Mba hamaranana, tiako ny hanamarika fa ny paradigm-tsolika amin'izao fotoana izao dia mifototra amin'ny traikefa amin'ny mpampiasa. Izany no antony tokony handinihanao voalohany ny kalitao fampahalalana tianao hampiroboroboana sy ny fahefan'ireo vohikala mpiara-miasa izay tianao hampidirina ny tranonkala. Mba hahazoana ny vokatra tsara indrindra azo avy amin'ny fanentanana fanentanana, tokony hampifandray ny SEO sy ny fifandraisana amin'ny daholobe. Ny raharahambarotra dina dia afaka mandray anjara amin'ny fantsona fampiroboroboana maro toy ny marketing mediam-bahoaka, e-mail marketing, famoahana bilaogy ary ny sisa. Farany, azonao atao ny mamarana ny lanjany mahomby amin'ny alàlan'ny fantsona rehetra Source .